25 | April | 2012 | Dr Ko Ko Gyi's Blog
Instant Staged-show Democratization of Myanmar byamagician
Instant Democratization of Myanmar byamagician
ဥုံ… အပ်ချလောင်း…… By: Waiyan Winzaw
မြန်မာမွတ်စလင်မ် ပြည်သူများအား မုန်းတီးသူများသို့မေးခွန်း
Source: MMSY– မြန်မာမွတ်စလင်မ် ပြည်သူများအား မုန်းတီးသူများသို့မေးခွန်း (ပေးစာ ကဏ္ဍ)
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မွတ်စလင်မ်မုန်းတီးရေးရေချိန် မြင့်သထက်မြင့်လာနေသည်။ ယခင့်ယခင်က မွတ်စလင်မ်မုန်းတီး ရေး စာပေများကို အစိုးရနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ အစွန်းရောက်အဖွဲ့ အစည်းများက ဖြန့် နေကြောင်း ကြားဖူးသော်လည်း ကိုယ်တိုင်မတွေ့ ဖူးမမြင်ဖူးခဲ့။ အင်တာနက်ခေတ်စားလာသော ယခုခေတ်သယမတွင် မွတ်စလင်မ်ပြည်သူများ အားပုတ်ခတ်ရေးသားသော အီးမေးလ်များ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာများ၊ ကော်မန့် များကို နေ့ စဉ်လိုလို မြင်နေ ကြားနေရသည်။ ဒီကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာမွတ်စလင်မ်ပြည်သူတစ်ယောက်အနေဖြင့် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ ပြည် သူများကိုမေးခွန်းတချို့ မေးချင်သည်။ မေးခွန်းများ မမေးခင် ကျနော့်အကြောင်း ပြောပါမည်။
Tags:Asia, Aung San Suu Kyi, Burma, Burmese language, Naypyidaw, Non-governmental organization, Social Sciences, Thein Sein
U Thein Sein and Daw Suu must take firm action on anti-Muslim instigators and rioters
The incidents occurred recently by the so-called monks destroying Masjid are the double edge plots. These incidents were targeted not only to the Islam, but for the President U Thein Sein led Democracy Forming Government. No doubt that those behind these plots are hard liners.
Tags:Aung San Suu Kyi, Burma, Burmese Government, Islam, Muslim, Myanmar, Thein Sein, Washington